Munaasibadda Sanad guuradii 96-aad ee ka soo wareegatay markii la-aas aasay Jamhuuriyada Turkiga lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Munaasibadda Sanad guuradii 96-aad ee ka soo wareegatay markii la-aas aasay Jamhuuriyada Turkiga lagu qabtay Muqdisho
Munaasibadda Sanad guuradii 96-aad ee ka soo wareegatay markii la-aas aasay Jamhuuriyada Turkiga ayaa lagu qabtay Safaarada Turkiga ee Muqdisho.
Munaasibadda waxaa ka soo qayb galay Gudoonka labada Aqal Baarlamaanka dalka Xildhibaano, Wasiiro, Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Taliyaha Ciidanka qalabka sidda iyo qeybaha kala duwan ee Ururadda Bulshadda Rayidka ah.
Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed aysan iloobi karin gurmadkii uu u sameeyay Madaxweynaha dalka Turkiga iyo guud ahaan shacabka dalkaas kuwaas oo garab istaag weyn u muujiyey Soomaaliya xilli abaar daran dalka ka dhacday.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Dowlada iyo Shacabka Turkiga uu u jeedinayo hambalyo ku aadan Munaasibada sanad guuradii 96-aad oo soo wareegatay markii la aas aasay Jamhuuriyada Turkiga.
Dhageyso Sheekada Isku-maan